निद्रा गडबड हुने ७ कारण – Etajakhabar
डा. निरञ्जन आचार्य, न्युरोलोजिस्ट, सिभिल अस्पताल निद्रा मस्तिष्कका कोषहरुले आराम गर्ने अवस्था हो । काम गर्दाको थकान मेटाउन शरीरलाई जसरी आरामको आवश्यकता हुन्छ त्यसरी नै ब्रेनलाई पनि आराम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो आराम ब्रेनले सुत्दा पूरा गर्छ । एक अध्ययनका अनुसार मानिसले जीवनको एक तिहाई समय सुतेरै बिताउने गर्दछ । तर, राम्ररी निद्रा नलाग्नु वा धेरै निद्रा लाग्नुजस्ता समस्याले हामीलाई तनाव दिइरहेको हुन्छ।
केही व्यक्ती राम्ररी सुत्न सक्दैनन् । केहीलाई जति सुत्दा पनि निद्रा पुग्दैन । मेडिकलको भाषामा धेरै सुत्नेलाई नार्कोलेप्सी भनिन्छ भने निद्रा नलाग्नेलाई इन्सोम्निया भनिन्छ । सिभिल अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेमध्ये दैनिक १० देखि १५ प्रतिशत बिरामी निद्रासम्बन्धी समस्या लिएर आउँछन् । बदलिँदो जिवनशैली र व्यस्तताका कारण अधिकांशमा यस्ता समस्या देखिएको पाइन्छ । सामान्यतया निद्रा दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा हल्का निद्रा र अर्को गहिरो निद्रा ।
हल्का निद्राः राम्ररी सुत्न नसक्नु अथवा सुतेको अवस्थामा थाहै नभई धेरै पटक ब्युँझिनुलाई हल्का निद्रा भनिन्छ । यस्तो समस्या भएका मानिसहरु निद्रामा धेरै पटक ब्युँझिन्छन् तर थाहा पाउँदैनन् । यस्तो निद्रामा सपना धेरै देखिने, निद्रामा बोल्ने, लामो समयसम्म निदाउन नसक्ने र छोटो समयका लागि गहिरो निद्रा लाग्ने र फेरि ब्युझिँने आदि समस्या देखिन्छन् । राति मस्त निदाउन नसकेका मानिसलाई दिउँसो निद्रा लागिरहने, जिउ दुख्ने, स्फुर्ती नबढ्ने, अल्छी लाग्ने आदि हुन्छ ।
गहिरो निद्राः मस्त सुत्नुलाई गहिरो निद्रा भनिन्छ । यो स्वस्थ प्रकारको निद्रा हो । यसलाई ‘साउन्ड स्लिप’ पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो निद्रा पर्नेहरु घरी उठ्ने घरी निदाउने गर्दैनन् । गहिरो निद्रा पर्नेहरु एकचोटि निदाएपछि निद्रा पूरा भएपछि मात्र ब्युँझन्छन् । यस्तो निद्रामा सपना उतिसाह्रो देखिन्न ।
डा. निरञ्जन आचार्य
उमेरले २० वर्षको हाराहारीमा रहेको एक स्वस्थ व्यक्ति दिनमा आठ घण्टा सुत्नुपर्ने हुन्छ । तर, जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति निद्रा घट्दै जान्छ । उमेर अनुसार मस्तिष्कको परिपक्वता बढ्दै जाने भएकाले निद्रा पनि उमेर अनुसार फरक पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०६, २०७३ समय: ८:११:४८